उहाँहरुको मुटुमा नै बस्न चाहन्छु करिष्मा मानन्धर -
उहाँहरुको मुटुमा नै बस्न चाहन्छु करिष्मा मानन्धर
२० माघ २०७२, बुधबार १६:२९ February 3, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on उहाँहरुको मुटुमा नै बस्न चाहन्छु करिष्मा मानन्धर
पछिल्लो समय राजनीतिमा नेपाली कलाकारहरुको सक्रियता निकै बढिरहेको छ । यसैक्रममा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा सरोज खनालपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर र निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा पनि सहभागी भएसँगै सिने क्षेत्रमा तरंग नै पैदा गरिदिएको छ । नायक–नायिकाप्रति अनेक खालको टिप्पणी समेत सुन्न थालिएको छ । यसै सन्र्दभमा हरि गजुरेलले नयाँ शक्तिमा लागेकी करिष्मा मानन्धरसँग गरेको कुराकानीको अंशः
नयाँ शक्तिमा लागेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
राजनीति पार्टीप्रति जनमानसमा नकरात्मक प्रतिक्रिया पाइन्छ । राजनीतिप्रति जनमानसमा कति धेरै ‘हाइली डिप्रेस’ रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरुबाट आउने प्रतिक्रियाले नै थाहा हुन्छ । तर भनिन्छ नि, आधा ज्ञान सँधै खतरा हुन्छ । मलाई लाग्छ पूर्ण रुपमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिँदा राम्रो हुन्छ । जनताका साथ बिना कुनै पनि राजनीतिक दलको सोचाई पूरा हुँदैन । नयाँ शक्तिको सोचाई पनि सबै जनतालाई सँगै लिएर सामूहिक रुपमा सहभागितामूलक पार्टी बनाउने हो ।
म एउटा नायिका हुँ । हिजो राजनीतिक विचारधारा बोकेर हिडिनँ । केही समयदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै गर्दा राजनीतिले प्रभाव नपारेको कुनै ठाउँ भेटिन । विगत एक वर्षदेखि म सामाजिक सेवामा क्रियाशिल छु करिष्मा मानन्धर फाउण्डशेनमार्फत । राजनीति पनि समाज सेवा गर्ने अर्काे हतियार हो । भष्ट्रचार र विकृतिका नराम्रो कुराहरुलाई मात्र समेटेर हेर्ने हो भने त्यो अर्काे पाटो । तर जनताको सेवा गर्ने यो पनि एउटा बाटो हो । यस्मा म मनैदेखि लागेको छु । डा. भट्टराईसँगको भेटघाटको क्रममा उहाँको सोच, विचारबाट म एकदमै प्रवाभित भए र उहाँहरुसँगै छु ।
कलाकार सबैको हुनुपर्ने हो, पार्टी विशेषको कलाकार हुँदा असर पर्दैन ?
म पार्टी विशेषको कलाकार होइन । म सबैको कलाकार हुँ, कलाकार भनेको सबैको हुन्छ । कलाकार हुँदैमा सामाजिक सेवा, राजनीति, व्यापार गर्न मिल्दैन भन्ने त कहीँ पनि लेखेको छैन नि ! कलाकार पनि मान्छे नै हुन । उस्का पनि अधिकार हुन्छ । म के गर्न सक्छु वा सक्दिन त्यो उस्को कुरा हो । राजनीतिमा लाग्दछ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनुपर्ने हो । कलाकारिता भनेको ‘कर्म’ हो । जस्ले मलाई करिष्मा मानन्धर भनेर चिनायो । राजनीति भनेको फरक पाटो भयो ।
हिजो पनि रेखा थापा, भुवन केसीसम्मलाई राजनीतिक दलले प्रयोग मात्र गरे भन्ने आरोप लाग्यो, अब तपाई लागेर के हुन्छ र ?
प्रयोग हुनु पनि गलत छ । प्रयोग हुने स्थानमा नबस्नुस । जनतालाई केही दिन नसक्ने स्थानमा नबस्नुस । म आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु, नयाँ शक्तिमा एउटा इट्टा थप्ने काम गरेको छु । यस्का जगैदेखि थाहा पाउने भए नि । मेरो उदेश्य ‘प्रयोग’ हुनु पनि होइन, यहाँ बसेर पोष्ट लिएर के के न गर्नु भन्ने पनि होइन । राजनीति गर्ने भनेर पार्टीको प्रचारप्रसार गर्ने हो । म पदका लागि नयाँ शक्तिमा आएको होइन । जनहितका लागि नयाँ शक्तिले के गर्न सक्छ भन्ने तर्फ नै मेरो ‘फोकस’ छ ।
तर, राजनीतिप्रति आमजनताको धारणा नकरात्मक भइरहेको समयमा तपाईँ जस्तो राम्रो छविको कलाकार यसरी पार्टीको झण्डा समाउदै हिड्दा असर पर्दैन ?
यति धेरै नकरातमक छ कि चाहिने भन्दा बढी । त्यसैलाई सकरात्मक बनाउन नयाँ शक्ति रोजेको हो । यो एउटा जोखिम पनि हो । संरचना बनाउनै दुई वर्ष लाग्दछ । जनमानसमा यो पार्टीले केही गर्न सक्दछ भन्ने पार्न नै दुई वर्ष लाग्दछ । अनि शक्तिमा नगई जनसेवा पनि गर्न नसकिने रहेछ । बच्चा नै नपाई लुलो, लंगडो छ भन्न त मिल्दैन नि । जनताले हरेक राजनीतिक दललाई मौका नदिएको पनि होइन । नयाँपनलाई जनताले स्वागत गर्ने गरेका छन् । अहिलेको कालखण्डमा नयाँ शक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै जनताको मनमा छ । तर त्यस्को स्वरुप कस्तो भन्ने मात्र थाहा नभएको हो । जस्लाई डा. बाबुराम भट्टराईले पूरा गर्ने खोज्नुभएको छ ।
दर्शकको मन जितेर बसेको करिष्मा सानो कारणले उहाँहरुबाट अपहेलित हुन चाहन्न, उहाँहरुको मुटुमा नै बस्न चाहन्छु । तर कुरा बुझेर मात्र कमेन्ट गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छ ।
तपाईको श्रीमान विनोद दाजुसँग केही कुरा भएको थियो होला, यो पार्टीमा लाग्नु अगाडि ?
(हाँसो …) मैले विवाह अगाडि नै एउटा शर्त राखेको थिए । म जे कुरामा पनि स्वतन्त्र छु । मेरो परम्परागत शैलीको विवाह बन्धनमा बाधिँएकी छैन म । मेरो स्वतन्त्रतामा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । हरेक कुरामा सहयोग नै गर्नुभएको छ । सुरुदेखि नै उहाँले सहयोग गर्दै आउनुभएको हो । केही दिन पछाडि विनोदले नै सञ्चालन गर्दै आएको नमस्ते टेलिभिजन सो मा हामी डा बावुराम भट्टराईलाई ल्याउदै छौं । यो पनि एकप्रकारको सहयोग नै त हो नि । मैले गरेका हरेक कुरालाई विनोदले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । जीवनसाथी भन्दा पनि रथको दोश्रो पाङ्ग्रा भएर सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
ओझेलको पर्यटकिय गन्तव्य सिलौटी
लोककिरण न्यौपानेले शतप्रतिशत मत
एमाले नेता श्याम कडेल संगको अन्तरबार्ता
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:२१ October 6, 2017 wwwmophasal
हाम्रो योजना सडक र पूर्वधार नै हो : अध्यक्ष काफ्ले
६ श्रावण २०७५, आईतवार ०६:३१ July 23, 2018 mophasal
पत्रकार महासंघ युएई अध्यक्ष :-भुपराज बस्याल
२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०३:५५ August 8, 2018 mophasal